Urban Kugara Imba, Kuturikira Iyo Runako rweEastental Aesthetics Yeiyo Brush Stroke ｜ Donghe Yipin
musha / Interior design / Urban Kugara Imba, Kuturikira Iyo Runako rweEastental Aesthetics Yeiyo Brush Stroke ｜ Donghe Yipin
2021 / 06 / 22 kupatsanuraInterior design 5508 0
DHYP Kuronga Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Nguva nyowani yemararamiro isina kutsanangurwa
Tarisa pane iwe pachako, pachena uye kwete kushaya chikonzero
Rarama zvakanaka, asi zvakare wakasununguka uye usingadzorwe
Kuzvifadza uye kutevera rudo rwemwoyo wako
Zvakareruka uye zvakachena, zvisingadzorwe uye zvinongoerekana zvaitika
Asi zvakadaro ndine chivimbo uye ndine chokwadi
Hupenyu hwakanaka hauna kumbofanana
Kuparadzira mwenje wakajeka uyo unopa rusununguko
Rarama wako chaiye wega
Icho chiratidzo chinonakidza kwazvo chehupenyu
Wese munhu ane nzira yake yekusvika hupenyu.
Dhizaina dhizaini yenzvimbo inoita kunge yakafanana nekutsvaga kwehupenyu.
Zvinokuvaraidza zvemuridzi, manzwiro, basa nekuzorora, hupenyu hwemagariro, maitiro ……
Dzese dzichava dzakabatana zvakanyanya nenzvimbo ino.
Nenzira, nzvimbo ndiyo "kutaura kwechokwadi" kwemuridzi wemba.
Muridzi wemba mune iyi kesi mukadzi akangwara zvakanyanya ane kuravira kwakanaka muhupenyu hwepamba.
Ane kuravira kwakanaka muhupenyu hwepamba, kuzvikoshesa uye rudo rwekunyora.
Iye anofarira kunakidzwa nehupenyu hwake akanyarara apo ari akasununguka uye avant-garde.
Hwaro hwepakutanga hweimba ndiko kushongedzwa kwakanaka.
Mushure mekufunga kwakati wandei, mugadziri haana kuchinja chimiro chemukati.
Asi, tarisiro yaive pa "runako",
"Nzvimbo" uye "mararamiro kunzwisisa".
Kuchengetedzwa kwepamoyo kunoshandiswa mukati mekugadzirwa.
Chikamu chakaomesesa chekudzora kuratidza kwako chaiko ndiko kubvisa.
Mugadziri anoda kugadzira nzvimbo yekuti vagari vanogona kunyatso "gadzikana navo".
Iyo nzvimbo inongoerekana yaitika, yakapusa uye yemahara kuyerera.
Iyo de-yakazara, yakajeka uye inooneka yakanyarara.
Pasina kunyanya kushongedza, zvirimo zvehupenyu zvinove zvinonyanya, uye nzvimbo inodzokera kumashure.
Iyo nzvimbo inoiswa kumashure, inogara ichizivisa rusununguko uye kuzvivimba, runako uye kudzikama kwekugara kwemaguta.
Nerudo rwepasi rose mupfungwa uye nhetembo kunaka kwepasi.
Iye anofarira kuve nehurukuro nyoro nenyika, uye kugara pamba ndiyo mamiriro aanofarira zvakanyanya.
Inopa yakawanda multidimensional uye yakachena nzira yekufunga kwenzvimbo dhizaini.
Siya rusununguko rwemashure madziro, huni dhizaini chinyoro toni
Ndiwo wakadzvanywa zvakanyanya base ruvara rwehupenyu.
Iyo contour uye zvinhu zvinowirirana neumwe neumwe kuti uwedzere huwandu hwenzvimbo.
Iyi inzvimbo yekutamba yemuridzi, uyezve
Ichowo nzvimbo yemusangano apo shamwari dzinogona kugara pasi chero nguva pavanoshanya.
Iyo gauze inokwevera kutsvoda kwezuva kubva mumba.
Iyo greenery iri muvhasi inopihwa zvakare imwe nhetembo zvinoreva.
Vhasi rerima rakasvibira rinopihwa kubata kwenhetembo, kuchichinja kuita munda wakasvibira pamba.
Ndega manheru, uchinwa kofi wega, uchiverenga bhuku kuti uone nyika.
Iyo yakapfava uye yakakomberedza beige pasofa ine yakasarudzika uye ine husimbe pleated dhizaini
Inowedzera chimiro chemazuvano kune iyo nzvimbo iri pachena uye isiri yekunyepedzera.
Inotakurika Samsung Mufananidzo Wenyika Art Art TV inopa yemahara uye isingadzorwe mhepo.
Uye iro rakareruka rezita rakatsanangurwa nemidziyo.
Iyo inozadza iko kusangana uye kudyidzana pakati pevagari nenzvimbo.
Iyo yakapfuma nhetembo hwema, yakanamatira pabepa.
Kuisa manzwiro mumabhurasho.
Kudziya, kushushikana, shungu, kuruma.
Pasi pemutsara wazvino wenzvimbo yemazuva ano
Asi zvakare yakavanzwa mune yekumabvazuva aesthetics yebrashi
Iyo yekuzorora uye yakasununguka kufarira inokura zvakasununguka.
Kubva pamifananidzo kusvika kumachira, kumadziro uye pasi.
Izvo zvakagadzirwa zvinhu zvinowedzera kuumbwa kwenzvimbo.
Yakapfava chena, yakajeka uye inodziya, huni ruvara, kudzikama uye kunyarara.
Pasi pechiedza chakawanda chechisikigo,
Iyo yakapfava ruvara musanganiswa inoridza yakasarudzika uye ine simba mutinhimira.
Nyoro uye akadzikama, akavhurika uye anofara.
Maruva nemafuta zvinogona kubikwa nemoto.
Hupenyu hwakajeka uye hunodziya.
Pakati pekuchena uye kusimba,
Unyanzvi uye kudanana zvinokura, uye mafirework anozvarwa.
Kubva panguva yaunovhura maziso ako mazuva ese.
Yese inchi yenzvimbo inofanira kuve zana muzana kugutsikana neyako aesthetics.
Hapana chinhu chakakosha kupfuura kuzvifadza.
Iyo pendi yemavara inoenderera neimba yekutandarira, uye panguva imwechete, kubatana kwenzvimbo
Gadzira yakasarudzika mamiriro ekurara nzvimbo.
Iwo maratidziro akareruka emhango rattan anounza kumhepo yakanyarara uye husimbe.
Matoni akapfuma ekupenda anorerutsa monotoni inounzwa nechena.
SaTao Yuanming's "achiona Gomo rekuSouth rakadekara",
Kunzwa kwemuridzi wevintage kwekugara mune zvakasikwa kunoonekwa.
Zita rebasa: Kofi iri muguta
Dhizaini Kambani: DHYP Donghe Kofi Space Dhizaini
Mukuru Wekugadzira: Zhou Chuanlong
Vakagadziri: Gao Xiaotong, Feng Qiu Cheng
Nzvimbo Yebasa: 206㎡
Nzvimbo: Jinan Vanke Metropolis
Yese Project Services: Yekutanga yekuvaka, yakapfava midziyo kutenga
Pin Xuan: Lin Qing
Dhizaina asina kunyarara
Muvambi weDonghe Yi Pin Space Dhizaini
Iye anoita zvepamusoro-kumagumo akasarudzika dhizaini uye anotsigira kuti hapana yakasarudzika maitiro ehupenyu.
Iye anotenda kuti dhizaini inofanirwa kunge yakavakirwa padudziro yezvinodiwa nevashandisi uye hunhu, inowedzerwa nehunyanzvi aesthetics, uye yakasarudzika dhizaini yemukati, kuti iratidze dhizaini inoshanda nekushisa, kudzika uye kukwirira.
Pakapfuura :: 58m2 Yakavhurika Kamuri Dhizaini, Yechidimbu "Mukaka Tea" Chimiro, Super Chimiro! Zvadaro: Iyo Yakabatanidzwa Chiitiko cheTsika, Mitambo Uye Bhizinesi, Kujekesazve Yekutengeserana Space ｜ UHG